Izindaba zezimboni |
Amathoyizi squishie uba umlingani omuhle wezingane
Amathoyizi angabalingani bokuhamba nezingane zabo ebuntwaneni obuhle. Njengamanje, kunezinhlobo eziningi zamathoyizi. Abazali baphinde batshale imali eningi nesikhathi ngamathoyizi abo, benethemba lokukhetha amathoyizi aphephile ezingane zabo. Amathoyizi squishie ithoyizi elisha eliphezulu eliphezulu elenziwe ngezinto ezibonakalayo ze-polyurethane, okuyinto ...
Izici zesilungu se-Kawaii zesilwane kanye nemisebenzi
ngu admin ngo 18-12-21
Ama-squishy wezilwane ze-Kawaii athambile futhi athambile enziwe nge-foam enobungane bemvelo. Zithambile kakhulu futhi ziyathandeka. Ukuphonsa kancane kakhulu, kuthambe kakhulu, ungayicwebezela bese uyibuka kancane, kuyathakazelisa kakhulu. Ungasebenzisa amandla esandla sakho futhi unciphise ukucindezeleka. Izici ze-Kawaii zezilwane ezishisayo: 1 ....
Izinhlobo ezi-3 zeSqueezable Stress Ball
Amathoyizi we-squishy angenye Ithuluzi elidumile elisetshenziswa ekuqedeni ukucindezelwa, kungaba lula ukuthola futhi lisebenza kakhulu ekukhululeni okusheshayo. Isibonelo, uhlobo oluthambile lwe-toast olukhula kancane lwe-squishy lungenziwa ngezinto ezahlukene. Uhlobo lwe-1.Beanbag Luhlobo lwakudala oluhle olutholakala jo ...
UDkt Toy Award
ngu admin ku 11-12-16
Le miklomelo inikezwe yiwebhusayithi kaDkt Toy. UDkt Toy empeleni nguDkt Stevanne Auerbach, umqondisi weSikhungo Sezinsizakalo Zobuntwana. Umklomelo uhlukaniswe ngezigaba zamathoyizi wesigaba nge-Best of Best isigaba. Amathoyizi wejaji likaDkt Toy Award angeniswa abakhiqizi bamathoyizi ...